Soo dejisan DVD Decrypter 3.5.4 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperDVD Decrypter
Bogga rasmiga ah: DVD Decrypter
DVD Decrypter – sahlan ah in la isticmaalo software in la DVD shaqeeyaan. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka boodo ilaalinta DVD iyo nuqul ka kooban yahay sida xidhmo oo ah faylasha ama image ISO. DVD Decrypter u saamaxaaya in ay arkaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan disc iyo faylasha waxaa duubay. Software ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan files si disk iyo rakibi ilaalinta on content lagu duubay. DVD Decrypter leeyahay interface fudud oo dareen leh.
Konteenarka ilaalinta DVD
Rakibtay ilaalinta on disk ah
Views macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan disk ah
Soo dejisan DVD Decrypter
Faallo ku saabsan DVD Decrypter
DVD Decrypter Xirfadaha la xiriira